News 18 Nepal || पैसा कमाउन अपनाउनुस् यी तरिका, जसले बनाउँछ सफल
पैसा कमाउन अपनाउनुस् यी तरिका, जसले बनाउँछ सफल
काठमाडौं । संसारमा हरेक मान्छेको एउटै चासो हुन्छ, पैसा कसरी कमाउने ? सुख सयल कसरी प्राप्त गर्ने ? संसारभरमा नै पैसा कमाउन नचाहने मानिस कमै होलान् । पैसा कमाउनका लागि कोशिस पनि आवश्यक पर्दछ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले आफ्नो क्षमता बढाउनु जरुरी हुन्छ ।
क्षमताको प्रयोग गरेर रोजगारी या कारोवार गर्नु उत्तम हुन जान्छ । त्यसबाट बचत तथा लगानीका लागि थप अवसर समेत खोज्न सकिन्छ । वित्तीय क्षेत्रका जानकाहरु भन्छन् पैसा कमाउनका लागि सपना मात्रै देखेर पनि हुँदैन । त्यसका लागि सही र सहज प्रयास समेत गर्नु जरुरी हुन्छ ।
सपना देख्नेले मात्रै समाजमा ठूलो प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा र पैसा समेत कमाउन सक्छ । सपना नदेख्ने र महत्वाकाक्षा नराख्नेले समाजमा कुनै पनि प्रकारको प्रगति गर्न सक्दैन । सपना र महत्वाकाक्षाले मात्रै तपाईको दायरलाई फराकिलो बनाउन सहयोग पुग्छ ।
यदि तपाई केही ठूलो काम गर्ने र सपना देख्नुहुन्छ तब तपाईलाई त्यसले केही न केही थप मार्ग प्रशस्त गरिदिन्छ । सपना देख्नले नै त्यसलाई पूरा गराउन हर सम्भव प्रयास गर्दछ । आफूलाई सफल बनाउन प्रयत्न गर्न सक्छ । तपाईको त्यस्तो सपनाको कसरी पूरा गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि तपाईलाई उपयुक्त लाग्ने योग्य व्यक्तिको समेत सहयोग लिन सक्नुहुन्छ ।
आफ्नो क्षमताको पहिचान
जानकारहरु भन्छन्, तपाईको क्षमता, योग्यता के हो त्यो पहिचान गर्नुस् । त्यसले तपाईलाई सफल हुन मद्दत मात्रै गर्दैन, मार्गनिर्देशन समेत गर्दछ । तपाई आफ्नै बारेमा यो जान्न जरुरी छ कि तपाई सबैभन्दा सहज र सजिलो तरिकाले काम गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईले मनदेखि नै गरेको काम तथा क्षमताको पहिचानले मात्रै तपाईले खोजेको सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ । यसलाई ध्यानमा राख्नुस कि जीवनमा सफलता हासिल गर्न वा पैसा कमाउनका लागि मतिस्कलाई सही दिशामा लगाउन जरुरी हुन्छ ।
कडा मेहनतको विकल्प छैन
पैसा कमाउने विषय सजिलो र सहज छैन । त्यसका लागि कडा मेहनत र डेडिकेशनको जरुरी पर्दछ । असाध्यै तल्लो तलबाट माथि उठेका संसारका ठूला मान्छेहरुले जीवनमा गरेको संघर्षका कथा पढ्नुस् । दुःखबाट सफलता हासिल गरेर व्यक्तिको कथा र जीवन संघर्षले तपाईलाई प्ररित गर्दछ । तपाईको क्षमता बढाउन र मेहनत गर्नका लागि त्यसले तपाईलाई प्रेरित गर्दछ ।
वारने बफेट हुन वा अमेजनका मालिक वा रिलायन्स इन्डस्ट्रिजका मालिक मुकेश आम्बानीले सपना देखेका कारण नै सफलता हासिल गरेका हुन् । कुशलतापूर्वक सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । सफलता हासिल गर्नका लागि तपाई सधै तत्पर समेत हुनुपर्दछ । तपाईको सपना पूरा गर्न कडा मेहनत गरेपछि त्यसले मात्रै स्वर्णिम भविस्यको उज्यालो सम्भावना तय गर्न सक्छ ।
हातको औला हेरेर यसरी थाहा पाउन सकिन्छ स्वभाव
शरीरको यी भाग फर्फराए हुन्छ धन लाभ !
यी उपहार जसको आदान प्रदानले हुन सक्छ अनिष्ट !
सपनामा सुन्दर युवती देख्दा कस्ताे फल प्राप्त हुन्छ ? जानी राखौं
कुन दिशामा फर्केको घर हुन्छ शुभ ? यसो भन्छ वास्तुशास्त्र
धनी मानिसहरु यसरी लगानी गरि बन्छन् झन् धनी
यस्ता महिलासँग विवाह गर्न रूचाउँछन् पुरुषहरु
आफ्ना बच्चालाई गराउनुस् यस्तो योगासन, हुनेछन् बुद्धिमान्
मंसिर १४ गते आइतबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यमा भारी गिरावट
नेकपा बैठक सम्पन्न, भयो यस्ता निर्णय
भगवान् गणेशलाई किन चढाउनु हुँदैन तुलसी ?
ओलीको दम्भले पार्टी फुट्ने भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डको चेतावनी
छोराले पिताको शवलाई परिक्रमा गरी गरे विवाह, यस्तो छ मार्मिक तथ्य
जब डिभोर्सकै दिन लोग्नेलाई पर्‍यो ९ अर्बको चिठ्ठा
कोरोना संक्रमणबाट दाजुभाइको निधन, थिए कांग्रेसका महासमिति सदस्य
रेमन मिडिया एण्ड टेक्नोलोजी (प्रा. लि.)
समाजमा लुकेका र लुकाइएका हरेक घटनामा हाम्रो ध्यान जानेछ । हामी ताजा र खोजमूलक समाचार निस्पक्ष रुपमा निरन्तर प्रस्तुत गर्नेछौं ।
सर्वाधिकार सुरक्षित । २०७६/७७ News18 Nepal